एकमात्र औषधि प्रजातन्त्र :: Kitab Kiro - Complete Book News
२०७४ कार्त्तिक ५ गते उपन्यास अंशः हन्बेर्नो
- दिनेशकुमार कार्की
२९ जुलाई, २०१२ । सुनकोस नदी एकतमासले बगिरहेको थियो । शान्त छाल सँगसँगै मन्दमन्द चिसो हावा चलिरहेको थियो ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा भुटान नागरिक समाजको बैठक बस्यो । माया, चन्द्रिका, कमला, सुरज, बाघबहादुर, प्रभात, विष्णु, रूपनारायण, दलबहादुर एवम् स्वदेश फर्किएका सम्पूर्ण भुटानी नागरिकले एकै स्वरमा न्याय, समानता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि प्रजातन्त्र भन्ने प्रस्ताव उक्त बैठकमा राखे । यसमाथि गम्भीर विचार-विमर्श भयो । सबैले प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो अभिमत राखे । यही क्रममा बुलबुलले उक्त प्रस्तावउपर राखेको विचार र भावी कार्यचित्रलाई सबैले समर्थन गर्दै बहुमतले पारित गरे ।निर्वासनबाट जन्मभूमि फर्केका ती भुटानीहरूका लागि खुलमखुल्ला हिँड्नु गाह्रो थियो । वाञ्चुक सरकारले यति सजिलै स्वीकार्नेवाला थिएन । फेरि पनि खप्परमाथि खतरा मडारिन सक्थ्यो । यो कुरा उनीहरूले बुझेका थिए । त्यसो हुँदा आफ्नै देशमा भूमिगत भएर बस्नुको विकल्प थिएन उनीहरूसँग ।
बैठकले तदनुरूप देशव्यापी रूपमा जनचेतना अभियानमार्फत प्रजातन्त्रको प्रकाश फैलाउने निर्णय गर्‍यो । तिनीहरू डफ्फा–डफ्फामा विभाजित भएर गाउँ पसे । सत्ताको स्वादमा रमाएका सिंहप्रति बफादार स्यालहरूले गरेका अपराधको भण्डाफोर गर्दै गाउँ–गाउँमा प्रजातन्त्रको लागि चेतनाको चिराग बाले ।
सरकारले सुइँको पाइहाल्यो । तिनीहरूलाई समात्न सैनिक लायो । प्रजातन्त्रविरोधीहरू तिनीहरूलाई निस्तनाभूत पार्न हात धोएर पछि परे । खतरासँग खेल्दै गरिएको त्यो अभियान अन्ततः सफलतापूर्वक सपन्न भयो । ल्होत्साम्पा, सारचोप, ङालोङ लगायत सबै जातिबीच पुगेर ती राष्ट्रका सेनानीहरूले प्रजातान्त्रिक विचारको बीउ छर्ने कामसँगै अभियान सकियो । त्यसपछि सबै अभियन्ताहरू सुनकोस नदीको किनारतिर लागे जहाँ अभियानको समीक्षात्मक कार्यक्रम गर्ने पहिले नै निधो भएको थियो ।
अनौठो संयोग भन्नुपर्छ— रञ्जित क्षेत्री उमेरले पचहत्तर वर्षका बूढामान्छे आँखामा आँसु बोकेर परिवारसँगसँगै पुनर्वासका लागि त्यो दिन अमेरिका हिँड्न तयार हुँदै थिए । उसै दिन उता भुटानमा सारचोप, ङालोङ र ल्होत्साम्पा लगायत सबै समुदायका मानिस र भुटान नागरिक समाजका अभियन्ताहरू तिनै रञ्जित क्षेत्रीका पिता महासुर क्षेत्रीले प्रजातन्त्रका लागि प्राण उत्सर्ग गरेको ठाउँ सुनकोसको किनारमा भेला भइरहेका थिए ।
एकचोटि बुलबुल र उसका साथीहरू भुटान नागरिक समाजको गठन, उद्देश्य र यसको कार्यदिशाको बारेमा आवश्यक सरसल्लाह गर्न र सुझाव लिनका लागि बेलडाँगी शरणार्थी शिविर गएका थिए । रञ्जित क्षेत्रीलाई भेटेर निर्वासन, स्वदेशफिर्ती र भुटानमा प्रजातन्त्रबारे गफिएका थिए । यसउपर बुलबुलको विचार सुनेपछि क्षेत्रीको अनुहारमा एउटा चम्किलो खुसी छाएको थियो । तत्क्षण उनले गर्जमान गुरुङको रहस्यमय अन्त्य, उनका पिता महासुर क्षेत्रीको निर्मम हत्याको कालो कथा आँसु झार्दै सुनाएका थिए ।
बुबाले अँगालेको बाटोमा भुटान नागरिक समाज हिँड्न खोजेको देखेर उनले जोसिँदै सरसल्लाह र सुझाव दिएका थिए तर उनको त्यो खुसी र जोस धेरै बेर अनुहारमा टिक्न सकेन । एकै छिनमा फिका भएको थियो । सायद त्यस सप्ताहमा उनले पुनर्वासको लागि फाराम भर्नुपर्ने थियो । उनी बाध्य थिए किनकि उनको परिवार पुनर्वासको लागि अमेरिका जाँदै थियो र सँगै घिसारिनुको विकल्प थिएन । त्यही विवशताले उनको अनुहारको उज्यालोलाई उडाएको थियो ।
न्याय, समानता र स्वाधीनताका पक्षधरहरूले भुटानको राष्ट्रिय झन्डा सुनकोसको किनारमा फहराएपछि समीक्षात्मक कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भयो । वक्ताहरूले क्रमैसँग जनताका पिरमर्का र अभियानप्रति उनीहरूले जनाएको प्रतिक्रिया एवम् आफ्ना विचार राख्दै गए । उता त्यही क्षण नेपालस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा रञ्जित क्षेत्रीका बूढा पाइलाहरू रुन्चेचोकतिर बढिरहेका थिए । दमका रोगी, आँखाका बिरामी रञ्जितलाई आइओएमको गाडीमा चढ्ने मन थिएन । अमेरिका जाने मन थिएन । ओहियोमा बस्ने चाह थिएन तर पनि उनी जाँदै थिए ।
गाडीमा चढ्नुअघि उनले उत्तरतिर उठेका अग्लाअग्ला पहाडपारि छोडिएको जन्मभूमिलाई सम्झिए । प्रजातन्त्रको लागि उनका पिताले दिएको बलिदानीलाई स्मरण गरे र मनमनै भने, ‘बुबा ! एक बहादुर केटी छे, जो तपाईंको जस्तै कुरा गर्छे । त्यो केटीमा अचम्मको तेज छ । तपाईंको सपना भुटानमा प्रजातन्त्र थियो; त्यो उसले पूरा गर्छे । म यही विश्वास बोकेर ओहियो जाँदै छु ।’ तत्क्षण चस्माको बाक्लो पारदर्शी सिसापछाडि उनको आँसु झरेको देखिन्थ्यो ।
मुस्किलले उनी गाडीमा चढे । गाडीको झ्यालबाट आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ र बिदा गर्न आएका बस्तीका प्रियजनहरूलाई बिदाइको हात हल्लाए । उनन्तीस जना शरणार्थीलाई लिएर आइओएमको गाडीले बेलडाँगीको रुन्चेचोक छोडिरहँदा यता भुटान नागरिक समाजकी मुख्य अभियन्ता बुलबुलबुले रञ्जितका पितालाई सम्झिरहेकी थिई, ‘म आज जहाँ उभिएको छु, यो मेरो देशको धरती हो । यो मेरो जन्मभूमि हो । यही माटोमा प्रजातन्त्रका महान् योद्धा महासुर क्षेत्रीले जन्म लिएका थिए र हामी जहाँ भेला भएका छौं, यहीँ उनको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । यहीँ उनले भुटानको प्रजातन्त्रको लागि हाँसीहाँसी प्राणको उत्सर्ग गरेका थिए ।’
राष्ट्रिय झन्डामुनि उभिएको सारचोप समुदायको एक मानिसले प्रश्न गर्‍यो, ‘को थिए महासुर क्षेत्री ? कल्ले, किन ? कसरी गर्‍यो उनको हत्या ?’
जिज्ञासाले भरिएको उक्त प्रश्नको उत्तरमा बुलबुल विस्तारपूर्वक बोल्दै गई:
‘देशभित्र उर्लिएको जयगोर्खा आन्दोलन मत्थर भएको थियो । समय सँगसँगै जनताका समस्याहरू बढ्दै गइरहेका थिए । अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको भट्टीमा भुटिइरहेका थिए जनता । उनीहरूलाई उक्त दुष्चक्रबाट मुक्ति चाहिएको थियो । यही समयमा महासुर क्षेत्रीको जन्म भयो । उनले देश र जनतालाई धेरै नजिकबाट हेरे । दुवैलाई लागेको रोग पत्ता लाए । त्यसको एकमात्र औषधि प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरा उनले बुझे र सोही कुरा जनतालाई पनि बुझाउँदै गए । उनले स्वदेश तथा विदेशका नेताहरूसँग सम्पर्क बढाए र देशभित्र परिवर्तनको माहोल खडा गरे । छोटो अवधिमा उनी जनताको आँखाको नानी अनि जहानियाँ वाञ्चुक सरकारको आँखाको कसिङ्गर भए ।
जिग्मे पाल्देन दोर्जी त्यसताका हाको डुङ्ग साथै दक्षिण भुटानको प्रमुख थियो । ऊ कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रको पक्षमा उर्लिएको यो विचारलाई दमन गर्न चाहन्थ्यो । महासुर बस्नेत क्षेत्रीलाई जसरी भए पनि समातेर जेलको चिसो छिँडीमा सुताउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उसले जाल बिछ्याउन थाल्यो ।
सन् १९५२, फेब्रुअरी २७ । बिहानको १० बजे । सारभाङ अफिसबाट नियोजित ढङ्गले गेटे नाम भएको एक जिङ्गपलाई महासुरको क्षेत्रीको घरमा पठाइयो । उसले त्यहाँ पुगेर महासुरसँग भन्यो, ‘जिग्मे पाल्देन दोर्जी अफिसमा आउनुभएको छ । उहाँको तपाईंसँग माछा मार्ने इच्छा रहेछ । त्यसो हुँदा एसडिओ साहेबले तपाईंलाई बोलाउनका लागि मलाई पठाउनुभएको हो ।’
कुनै समय जिग्मे पाल्देनसँग महासुर क्षेत्रीको आत्मीयता थियो । दुवैले एउटै अफिसमा काम गरेका थिए । महासिंहले जागिरे जीवनबाट अवकाश लिएपछि पनि सम्बन्ध धूमिल भएको थिएन । आफूलाई जिग्मे पाल्देनले सम्झेकोमा, विगतमा सँगै गरेको रामरउस दोहोर्‍याउन बोलाएकोमा उनी खुसी भए । दौरा, सुरुवाल, अस्कोट, टोपी लगाए । कम्मरमा खुकुरी भिरे र गेटेसँग साथ लागेर गए ।
ललाई महाजन, रविलाल र डिबी खत्रीका साथमा दोर्जी सारभाङ खोलाको पुल नजिकै पर्खिरहेका थिए । कुनै बेलाका हाकिम एवम् परम् मित्रलाई देखेर महासुर प्रसन्न भए । दोर्जीको चेहेरामा पनि एकखाले मुस्कान चाकाचुली गर्न लाग्यो । भेटाघाटा भयो । दुवैले अङ्कमाल गरे ।
दोर्जीले महासुरको ढाडमा ढपढपाउँदै भन्यो, ‘मलाई आज माछा मार्ने मन भयो ।’
‘हुन्छ ! म तयार छु,’ महासुरले जवाफ दिए ।
गफ गर्दै तिनीहरू उकालो लागे । जब एक–डेढ किलोमिटर हिँडेपछि दोर्जीले हठात् महासुरको अस्कोटको गोजीमा हात हाल्यो । दोर्जीले जे सुनेको थियो, जे उसलाई सुनाइएको थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालको कागज फेला पार्‍यो । थुप्रै प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू डिबी गुरुङ, डिबी खत्री, दलमर्दन राय, गणेश प्रसार्इं, डम्बरसिंह चोक्दाक, पाङ्गिम मगर, सहवीर आदिको नाम त्यस कागजमा लेखिएको थियो ।
कागज हेरिसकेपछि दोर्जीको व्यवहार एकाएक बदलियो । उसको अनुहार डढेलोले खाँदै गरेको जङ्गल जस्तो देखियो । उसका आँखा भाले मलसाँप्रोका झैं क्रोधित देखिए ।
ऊ अत्यन्त रुखो स्वरमा जर्किंदै बोल्यो, ‘महासुर ! तैँले अहिल्यै चिराङ जानुपर्छ । ल हिँड् !’
महासुरलाई त्यसपछि मात्र आफू षड्यन्त्रको सिकार भएको थाहा भयो । परिस्थिति तुरुन्तै बदलियो । उनलाई तत्कालै हतकडी लगाइयो । दोर्जीले सेनालाई आदेश दियो, ‘यसको घरमा जाऊ । खानतलासी गर । यसको छोरोलाई समातेर लेऊ । घरमा ताला लगाइदेऊ ।’
उसको आदेशबमोजिम सेनाहरू महासुरको घर गए । खानतलास गरे । महासुरका जेठी, कान्छी दुवै पत्नीसहित पूरै परिवारलाई घरबाट निकाले र ताला लाए । महासुरका बाह्र वर्षे छोरो रञ्जित र पाँच घोडाहरू लिएर आए ।
बाबुछोरा दुवैलाई सेनाले घोडामा राखेर चिराङ लग्यो ।
डम्फू पुगेपछि तिनीहरूले रञ्जितलाई छोडे र महासुरलाई कालकोठरीमा जाके । दिनको एक दर्जनको दरले बढाउँदै महासुरलाई बेतलौरीले चुट्ने आदेश भयो । कठोर यातना दिएर राखेको केही दिनपछि महासुरलाई आजन्म कारागारमा राख्ने आदेश दिएर जिग्मे पाल्देन दोर्जी फर्किने तरखरमा थियो, उसैबखत प्रतिमान काफ्ले र भुँडे नेपाल नाम गरेका जीवहरूले जिग्मीसमक्ष घृणित आपत्ति राखे— महासुरलाई यहाँ राख्नु हुँदैन । यो भाग्न सक्छ । भागेमा यसले राष्ट्रलाई खतरा पुर्‍याउन सक्छ ।
गाउँका मण्डल तथा मुख्तियारसमेत रहेका ती व्यक्तिहरूबाट आएका कुरालाई दोर्जीले ध्यानमा राख्दै आफ्नो विचार बदल्यो । पुनः रञ्जितलाई गिरफ्तार गर्न लगायो र नाम्ग्ये नाम गरेका आर्मी–हवल्दारलाई आदेश दियो, ‘यी बाबुछोरा दुवैलाई पारो लानू ।’
हवल्दार नाम्ग्येले आज्ञा शिरोपर गर्‍यो ।
आर्मीको हवल्दार नाम्ग्येको नेतृत्वमा गेटे, जाक्पालासहित बीस–पच्चीस सैनिक जवानको टुकडीले महासुर र रञ्जितलाई लिएर दिउँसो ३ बजे पारोतिर लागे ।
त्यतिखेर पारो भुटानको राजधानी थियो ।
संयोग यस्तो भयो कि हवल्दार नाम्ग्ये महासुरका घनिष्ट मित्र थिए । उनी जसरी हुन्छ, महासुरलाई बचाउन चाहन्थे । त्यसकारण उनले चिराङको धजेडाँडामा पुगेपछि केही कोल्टे परेको स्थानमा चियाखाजा र जाँडपानीको व्यवस्था गरे । सबै चियाखाजामा व्यस्त भए । महासुरलाई पहिले नै नाम्ग्येबाट सङ्केत मिलिसकेको थियो । ठिक यही मौकामा महासुरले भाग्ने हिम्मत जुटाए र छोरो रञ्जितलाई भावुक हुँदै भने, ‘छोरा ! नाम्ग्ये हुन्जेल तँलाई केही हुँदैन । नडराउनू, दैवले चाहेमा हाम्रो भेटघाट अवश्य हुन्छ !’
छोरा रञ्जितले हिम्मत जुटायो र बुबालाई भाग्नका लागि विह्वलतापूर्वक शिर हल्लाउँदै स्वीकृति दियो । महासुरले आफ्नो छोरालाई एकफेरो प्रेमपूर्ण दृष्टिले हेरे र जङ्गलको बाटो छोकानातर्फ धाइफल तोडे । भीर, पहरा, वनजङ्गल लुक्दैभाग्दै तीन दिनपछि उनी रातोपानी गाउँमा पुगे ।
त्यहाँ उनको जेठान बिर्खबहादुरको घर थियो ।
हवल्दार नाम्ग्येले कैदी भागेको बहाना गर्दै सेनाका जवानहरूलाई खोज्न आदेश दिए अनि आफू चाहिँ बालक रञ्जितलाई लिएर चिराङ फर्किए । महासुर भागेको खबर सनसनी फैलियो । उनलाई समात्ने वा लुकेको देखाउने व्यक्तिलाई इनाम दिने घोषणा गरियो । गाउँ–गाउँमा छापा मारियो । महासुरको खोजीमा सारा चिराङवासीलाई दौडाइयो ।
भोक, प्यास र त्रासले परिक्लान्त शरीर लिएर ससुरालीमा पुगेका महासुरले सादर महसुस गरे । सन्तोषको सास फेरे । जेठान बिर्खबहादुर भने खुसी भएन बरु डरायो । ‘यहाँ खतरा हुन्छ भन्दै’ उनलाई जङ्गलको ओडारमा लिएर गयो । महासुरलाई गोडाचारेक केराका कोसा दिँदै बिर्खबहादुरले भन्यो, ‘ज्वाइँ, यो खाँदै गर्नू । म थप खानेकुरा लिएर आउँछु ।’
महासुरलाई होला त नि भन्ने लाग्यो । उनले समर्थनमा मुन्टो हल्लाए । बिर्खबहादुर त्यहाँबाट हिँड्यो । उनी पर्खेर बसिरहे ।
बिर्खबहादुर मक्खीचुस र नीच थियो । उसको मनमा सरकारी इनामको लोभ पस्यो । ऊ घर गएन । सोझै कारबारी गजे दहालकहाँ गयो र सारा हालखबर बतायो । साइनोले गजे महासुरको सम्धी पर्थ्यो । महासुरको बारेमा वृत्तान्त सुनेपछि गजेको मनमा पनि सरकारी बक्सिसको लालच लहलह लहरियो । ऊ लोभमा लतपतिँदै सिधै सारभाङ अफिस गयो र सरकारी अधिकारीसमक्ष भन्यो, ‘सरकारले खोजेको अपराधीलाई मैले पत्तो लाएको छु ।’
भोटे सरकारलाई चाहिएको यति थियो । साइनो सम्बन्धलाई किल्चीमिल्ची पारेर गजेले सेना लिएर महासुर लुकेको ओडारमा गयो । सम्धी र जेठानका साथमा सेना आएको देखेर महासुर घोर आश्चर्यमा परे । अक्क न बक्क भए । निराशाले उनलाई निमोठ्दै लग्यो ।
आफ्ना भनिएका मान्छेको विश्वासघातबाट उनी सेनाको सङ्गीन घेरामा परे । सेनाले उनलाई कुट्दैपिट्दै, लछार्दैपछार्दै, दोक्च्याउँदै, मुड्क्याउँदै, अनेकौँ यातना दिँदै लामीडाँडा पुर्‍यायो । ठूलो ओखरको रुखमा पाता फर्काएर उभ्यायो । उनको शरीर रगतपच्छे थियो । पीडाले थरथर काँपिरहेको थियो ।
महासुरलाई समातेपछि रञ्जितलाई सेनाले छोड्यो । रञ्जित पिता भए ठाउँमा आयो । लगलगाइरहेको पिताको रगताम्मे शरीर देखेर ऊ कहालिई कहालिई रोयो । नानाखन्न विलाप गर्‍यो तर उसको विलाप सुन्ने त्यहाँ कोही थिएनन् ।
यो वीरतापूर्ण कार्य गरेबापत गजे दहालले तीन सय, बिर्खबहादुरले दुई सय र खोज्न जाने पचास–साठी जनाले बीसका दरले स्याबासी इनाम पाए । उनीहरू फुरुक्क परे । मोहोडा हँसिलो पार्दै घर फर्के ।
७ मार्च १९५२ का दिन महासुरलाई घिसार्दैघिसार्दै सुनकोस नदीको किनारमा ल्याइयो । महादेव थान छेउको घुमाउने दह नजिक पुर्‍याएपछि त्यो सैतानको समूह अडियो ।
महासुरलाई यति धेरै यातना दिएको थियो कि उनको शिर कुममा लत्रिएको थियो । उनी बेहोसझैँ थिए । उनको शरीरले घिस्रनु नपरेपछि होस केही बेरमा खुल्यो । वरिपरि हेरे । अघिल्तिर एसडिओ आग्ये दोर्जी, जाक्पाला, गेटे, उनका मित्र हवल्दार नाम्ग्ये र सेनाका जवानहरूलाई देखे ।
महासुरले आफू मारिन्छु भन्ने लख काटिसकेका थिए । त्यसो हुँदा उनले आफ्ना जहानपरिवार इष्टमित्र, नातागोता सबैलाई सम्झे; जसले उनलाई माया गर्थे । उनी जसका निम्ति लडिरहेका थिए, तिनै दुःखी भुटानी जनतालाई आँखा चिम्लेर सम्झे अनि मनमनै भने, ‘हे दुःखी हो ! तिमीहरूमाथि थोपरिएको अन्यायलाई मैले अन्त्य गर्न सकिनँ । मलाई माफ गर !’
मनमनै क्षामायाचना गर्दै आँखा खोले । उनका अघि मुर्कुटोले झैं टाङ फारेर जिग्मी पाल्देन दोर्जी उभिएको थियो । उसका हाप्सिलाका झैं दयाहीन आँखाहरूले महासुरका शरीरमा बसेका निलडाम, सिर्कनाका सुम्ला, फोका टुटुल्कालाई हेर्दै भन्यो, ‘मर्नेको अन्तिम इच्छा पूरा हुनुपर्छ भन्छन् । भन्, तेरो के छ अन्तिम इच्छा ?’
महासुरले बिस्तारै आफ्नो शिथिल शिर उठाए । शरीरमा बँचेको सारा शक्ति लगाएर जवाफ दिए, ‘प्रजातन्त्र नै मेरो अन्तिम इच्छा हो जो तैँले, तेरो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन ।’
महासुरको यो जवाफले जिग्मी पाल्देनको प्रभुत्वलाई दुम्सीका काँडाले झैं रोप्यो । अहङ्कारको अहिफेन काढ्दै दोर्जी पड्कियो, ‘तँ अलच्छिनी कुकुरको काल आयो… अब ल !’
उसका पागल मुड्कीहरूले महासुरलाई जथाभावी हिर्काउन थाल्यो । फोहोरी गाली ह्वालह्वाल्ती छाद्दै निलडाम ताकीताकी मुड्क्याउन थाल्यो । महासुरका घाउ दर्दहीन भइसकेका थिए । खालि शरीर बजेको मात्र उनलाई थाहा हुन्थ्यो ।
महासुरले हलुकासँग मुस्कुराउँदै बोले, ‘संसारको ठूलाठूला बादशाह भनौंदाहरू जनताद्वारा बढारिएका छन् । सदाका लागि चप्परीमुनि पुरिएका छन् । जिग्मी पाल्देन दोर्जी ! मलाई पूरा विश्वास छ, त्यो इतिहास कुनै दिन भुटानी जनताले दोहोर्‍याउनेछन् !’
दोर्जीका क्रूर पञ्जाहरूले महासुरको मुखलाई मुछ्यो । फेरि पनि उनी मुस्कुराइरहेका थिए ।
जिग्मीको आदेश अनुसार एउटा छालाको धोक्रो ल्याइयो । सैनिकहरूले महासुरलाई जिउँदै उभिन्डो पारेर त्यही धोक्रोमा खाँदे । उनी मानसिक रूपले मृत्युवरण गर्न तयार थिए । भयमुक्त हुँदै कण्ठस्थ गीताका ऋचाहरू उच्चारण गरे र मृत्युलाई अँगालो हाल्न तयार भए ।
महासुरलाई खाँदेपछि सैनिकले धोक्रोको मुख सिलाए । यसको पिँधमा ठूलो ढुङ्गो बाँधेर यही नदीको उः त्यो दहमा फ्याँके । महासुर मरेको प्रमाणित भएपछि मात्र तिनीहरू यहाँबाट आफ्नो दर्गदिशातिर लागे । यसरी उनको हत्या गरियो ।’
उपस्थित सबैका आँखामा आँसु अनि महासुरप्रति अपार श्रद्धा थियो । उनीहरू एकोहोरो बुलबुललाई सुनिरहेका थिए, ‘आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदी–बहिनीहरू ! मान्छे मर्छ तर उसले बोकेको सही विचार कहिल्यै मर्दैन । त्यो विचारलाई एक दिन बचाएर अघि बढ्ने मान्छे आउँछ ।’
बुलबुलको भावुक स्वर जोसिलो भयो अचानक, ‘हामी उक्त विचारलाई बोकेर अगाडि आएका छौँ । तपाईंहरूको निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति खडा भएका छौँ ।’
बुलबुलका अभिव्यक्तिलाई जनताले गम्भीर भएर सुनिरहेका थिए । उसैबखत हतियारधारी सैनिकहरू त्यहीँ आइपुगे र कार्यक्रम स्थललाई घेरा हाले । निसाना साँधेर आक्रामक अवस्थामा उभिए । त्यो देखेर सर्वसाधारणहरू आत्तिए । डरको डङ्का बज्यो । बुलबुललाई भने कुनै असर परेको थिएन । ऊ आफ्नै लयमा बोलिरहेकी थिई ।
चेमगाङ जेलको भूतपूर्व कमान्डर छिमी, जाङ्ले डुक्पा, जोङ्दा हिस्से, छिमी दोर्जी, डुङ्पा टी लेण्डुप र तिनका लठैतहरू प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिने सबैलाई समात्नका लागि सैनिकको सहारा लिएर त्यहाँ आएका थिए ।
चलिरहेको कार्यक्रमलाई भाँड्नका लागि भूतपूर्व जोङ्दा हिस्से चार लठैतसहित कार्यक्रमस्थलतिर बढ्यो । ऊ बुलबुलको नजिक आएपछि टक्क अडियो । निक्कै बेर चारैतिर हेर्‍यो र जोडले भुक्यो, ‘केटी… तँ धेरै बकबक नगर् । तेरो समय सकियो… ल । अब… बोल्ने मेरो पालो… ल ।’
उसले विषाक्त फणा फुलाउँदै थप्यो, ‘सुन सबैले…। जसरी यावा गाउँ जलेर ध्वस्त भयो, त्यसरी नै तिमीहरूका गाउँ पनि ध्वस्त होलान् । विचार गर । यिनीहरू… भुटानी होइनन् । देशद्रोही हुन् । सरकारले यिनीहरूलाई देश निकाला गरिसकेको छ । यिनीहरूले तिमीहरूलाई भड्काइरहेछन् । यस्ताका कुरा नसुन… बरु आफूलाई आत्मसमर्पण गर ।’
बुलबुल अझै रोकिएकी थिइन । तिनीहरूको कालो कर्तुत उदाङ्गो पारिरहेकी थिई । यो देखेर जाङ्ले डुक्पा आगिन्द बन्यो । जङ्गिँदै जोङ्खामा बम्कियो । उसले आदेश दिएको रहेछ । तुरुन्तै दुई जना वरिष्ठ तिघ्रेहरू दौडेर गए र बुलबुलको लाउड स्पिकर खोसेर जमिनमा फ्याँकिदिए अनि उसलाई पेस्तोलको आडमा अँठ्याए । बन्धनमा पारे ।
हिस्सेलाई उछिनेर जाङ्लेले बुलबुल भएतिर बुट बजायो । जरखरिएको जाङ्लेका बुटले भुइँलाई टेक्दा उत्पन्न ध्वनि अत्यन्त कर्कश थियो । बाघबहादुरलाई त्यो बुटको आवाजले बीस वर्षअघिको रातलाई सम्झायो । त्यो बुट बजेको रात उनका छोरीहरू बेपत्ता भएका थिए । उर्मिलाको बीभत्स हत्या भएको थियो । नम्रता बलात्कृत भएकी थिई । उनलाई असह्य पीडा भयो । बसिरहेको ठाउँबाट जुरुक्क उठे । उनीभित्र छुपेर रहेको बाघ पनि सँगसँगै अचानक उठ्यो । उनी जाङ्लेको बाटोमा तगारो हुँदै उभिए र खरो स्वरमा चुनौती दिए, ‘ए जाङ्ले ! तेरो हिम्मत छ भने पहिले मलाई छोएर देखा…।’
बाघबहादुरले थान थापे । एक बूढोमान्छेले ठाडो चुनौती दिएपछि जाङ्ले आश्चर्यमा पर्‍यो र क्रोधमा धुलो हुँदै च्याँठिएको स्वरमा सोध्यो, ‘तँ को होस्, भन् त ?’
बाघबहादुरले ‘तेरो काल हुँ’ भन्दै कन्पारो भत्किनेगरी बाघेझाप्पु हाने । जाङ्लेले एकैचोटि आकाशपाताल देख्यो । उसको अघि संसार फनफन्ती घुम्यो । त्यो ताजन सहन सकेन र रनथनिँदै जमिनको धुलो चाट्न पुग्यो ।
‘अब चिनिस् म को हुँ ?’
मालिक ढलेको देखेर जाङ्लेका जखमले जन्तुहरू डुक्रिए र बाघबहादुरमाथि खनिन तयार भए । जाङ्लेले जमिनमा जोतिएको मुन्टो उठायो र बाघबहादुरमाथि आँखा ताक्दै भन्यो, ‘नाइँ… पर्दैन । यो मेरो आहारा हो ।’
चारपाउ टेक्दै जाङ्ले खडा भयो । शरीरको धूलो टकटक्यायो र फेरि फौदारी गर्नलाई पाखुरा बजायो । तिघ्रा ठटायो ।
ङालोङ जातकी एक बूढी महिलाले उसैबखत हिम्मत देखाइन् । जोडसँग आवाज निकालेर सूचना दिइन्, ‘मेरो भाइ ! त्यो अपराधी हो । त्यसलाई नछोड् । यही पापीले तेरा फूलजस्ता छोरीहरूको सर्वस्व लुटेर मारेको हो । यो रमिला, प्रमिला र उर्मिलाको हत्यारा हो । यसलाई नछोड् भाइ ! ठोक्…!’
बूढीको कुरा सुनेपछि सेनाको कमान्डरले यथार्थ थाहा पायो । तत्कालै आफ्ना सैनिकहरूलाई बन्दुक थान्कोमा राख्न आदेश दियो ।
बाघबहादुरले पनि बस् यति नै थाहा पाउनु थियो । त्यसपछि उनीभित्र बदलाको बबन्डर चल्यो । जाङ्ले पनि कम्ती मापाको थिएन । सिँगौरी खेल्न तयार भयो किनकि बाघेझापडको रन्कोले उसलाई छोडेको थिएन । रिनिनिनिऽऽ बजाइरहेको थियो ।
जाङ्ले र बाघबहादुरबीच घमासान लड्डी पर्‍यो । घरी जाङ्ले माथि, बाघबहादुर तल । घरी बाघबहादुर माथि, जाङ्ले तल । उपस्थित जनताहरूले भनिरहेका थिए, ‘ठोक बाघबहादुर ठोक…। थिच बाघबहादुर थिच…।’
बाघबहादुरले घम्साघम्सीको क्रममा कसोकसो जाङ्लेको घिच्रोमाथि यसरी समाते कि उम्कन दिएनन् । पूरा शक्ति लगाएर इन्द्रधनुष आकारमा त्यसलाई आकाशतिर फ्याँके र पावा भ्यागुत्तो पछारे झैं पछिल्तिर भुइँमा ड्याम्म पछारे ।
विशाल मल्लयुद्ध चल्यो । उनले जाङ्लेको लादी काडेर छोडे । जब जाङ्ले ग्वाँऽऽ भयो तब उसलाई घिसार्दै लगेर सुनकोसको घुमाउने दहमा फ्याँके, जहाँ महासुर क्षेत्रीलाई जिउँदै बोरामा हालेर फ्याँकिएको थियो । जाङ्ले मर्न त मरेन तर त्यहाँबाट उठ्न सकेन ।
जाङ्ले दहमा परेपछि उसका लठैतहरू बुलबुललाई ऐँच्याउन छोडेर बाघबहादुरमाथि खनिए । भुटान नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले हात बाँधेर बसेनन् । प्रतिकारमा उत्रिए । सुनकोसको त्यो किनार कुरुक्षेत्रमा बदलियो । हेर्दाहेर्दै सुरज र उसका साथीहरूले बलात्कारी जोङ्दा हिस्सेलाई डन्ठीले डढेल्नो खुस्किने गरी हाने र थला बसाए ।
हिस्सेको अनुहार देखेपछि एक सारचोप महिला भिडबाट निक्लिएर आई । ऊ अति नै क्रुद्ध देखिन्थी । उसको हातमा नाम्लाको बरियो थियो । उसले हिस्सेको घाँटीमा बाँधेर घिसार्दै त्यही दहमा लगेर मुन्ट्याई । त्यो महिला दाह्रा किट्दै यसरी हिस्सेमाथि खनिएकी थिई मानौं उसले कुनै घृणित अपराधको बदला लिइरहेकी थिई ।
छिमी जेलको भूतपूर्व कमान्डर थियो । उसले सयौं बन्दीहरूलाई अमानवीय यातना दिएको थियो । तीमध्ये कत्तिको ज्यान लिएको थियो । भिडन्तमा ऊ बुलबुलका अघि पर्‍यो । सामान्य केटी ठानेर बुलबुललाई मुक्का हान्यो तर उसको मुक्का हावामा खेर गयो । रिसको मुस्लो दुवै कानबाट निकाल्दै बुलबुलमाथि लात्ती उठायो । यही मौकामा उसले त्यसको खुट्टो समाती । फनफन्ती हावामा घुमाई र जोडदार घुयेँत्रो हानी । छिमी गएर महिलाहरूको बीचमा झर्‍यो । महिलाहरूले त्यहीँमाथि दोक्च्याए र बुलबुलका अघि लगेर पसारे ।
‘बुलबुल ! नछोड त्यसलाई । …त्यही हो तिम्रो पिताको हत्यारो,’ एक महीतिघ्रेको ढाडमाथि बसेर सुरजले बुलबुललाई जानकारी दियो ।
आफ्ना पिताको हत्यारो भनेर चिन्नासाथ बुलबुलले उग्रचण्डीको रूप धारण गरी । दाह्रा किट्दै कटबाँसको रोलले बेस्सरी बजाई, थाकुन्जेल । उभित्रको पीडाको ज्वाला निभुन्जेल बजाई । जब त्यसको अस्थिपञ्जरको गिन्ती सकियो, तब उसले घिसार्दै लगेर त्यही दहमा फ्याँकिदिई ।
छिमी गएर जाङ्लेमाथि बजारियो ।
अर्को बलात्कारी डुङ्पा टी लेन्डुप, धर्मराज गुरुङको हत्यारो छिमी दोर्जी विष्णु काफ्ले र प्रभात राईको भामचुटाइमा परे । जब तिनीहरूको चेसीस चर्कियो, लादीगुदीले ठाउँ छोड्न आँट्यो तब तिनीहरूलाई पनि त्यही दहमा लगेर खँदार्ने काम भयो ।
नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले चाहेको भए ती सबैलाई त्यही दहमा डुबाएर सास निभाउन सक्थे तर त्यसो गरेनन् । जनताको जिम्मा लगाइदिए । जनताले तिनीहरूलाई दहबाट निकाले र भकुर्दै पानी छदाए । सिर्कनोले सोड्क्याउँदै, सिस्नोले मुताउँदै गाउँतिर लिएर गए । सायद उनीहरू गाउँलेको बीचमा राखेर तिनीहरूले गरेको अपराधको उचित सजाय दिन चाहन्थे ।
फेरि समीक्षात्मक कार्यक्रम सुरु भो । कमान्डरसहित सैनिकहरूले ती अभियन्ताहरूको कुरा सुने । सुनिरहँदा सैनिकहरू निक्कै गम्भीर भएका थिए । सामाजिक न्याय, प्रजातन्त्र र खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराले तिनीहरूलाई भित्रैसम्म छोएको देखिन्थ्यो ।
कार्यक्रम सकिएपछि सेनाहरू चुपचाप आफ्नो बाटो लागे । भुटान नागरिक समाजका अभियन्ता र जनताहरू प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा लगाउँदै सुनकोसको किनारैकिनार हिँडे ।
सुरज, बाघबहादुर र बुलबुलले सुनकोसमा अनुहार धोए । आँखा पखाले । क्षितिजतिर नजर उठाउँदै बुलबुलले मनमनै भनी— ‘मेरो शान ! मेरो मान ! मेरो आत्मसम्मान ! मेरो अभिमान ! मेरो स्वाभिमान ! सबथोक, मेरो प्यारो भुटान ! तिम्रो मुक्तिमा जीवन समर्पित भयो मेरो ।’
त्यसैबेला उसका आँखामा जोमोलरी हिमालको शिरमाथि कालो बादलको ढेडी फाट्दै गयो र चम्किला चाँदीका घेरा देखिँदै गए ।
(२७ गते शनिबार सार्वजनिक हुने दिनेशकुमार कार्कीको उपन्यास ‘हन्बेर्नो’बाट । उपन्यास इन्डिगो इन्कले प्रकाशन गरेको हो ।)
copied from : https://www.onlinekhabar.com/2017/06/595179